အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနှင့်အလုပ်လျှောက်ရန်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန်အတွက်ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်တောင်းခြင်း (ရောဂါ၅မျိုးပါ၀င်သောဆေးလက်မှတ်) - intouchmedicare
ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဟုလည်းခေါ်ပြီးဆေးပညာရှင်တစ် ဦးလက်မှတ် ထိုး၍ ဆေးကောင်စီမှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆရာ၀န်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်သတ်မှတ်ထားသောနေ့နှင့်အချိန်၌စစ်မှန်သောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရှိကြောင်းအတည်ပြုရန် အလုပ်လျှောက်ရန်ဆေးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက်ဆေးလက်မှတ် ၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တိုးဖို့အတွက်ဆေးလက်မှတ် ဆရာဝန်သည်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးစစ်ဆေးသူသည်ကားမောင်းခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်ရောဂါမှမရှိကြောင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများကိုကူးစက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ရောဂါများ မရှိကြောင်းဟုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ထိုဆေးလက်မှတ်ထဲ၌ပါ၀င်သေရောဂါ၅မျိုးတို့မှာ-
၅မျိုးရောဂါရှိဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်သည် ဘာတွေစစ်ရပါသလဲ ?
အလုပ်လျှောက်ရန်ဆေးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန်ဆေးလက်မှတ် ၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တိုးရန်ဆေးလက်မှတ် ဆရာဝန်သည်သင်၏ကျန်းမာမှုကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မည်သည့်ရောဂါမှမရှိကြောင်းကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အချက်များမှာ
1. ဆရာ၀န်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination
2. သွေးဖိအား၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အမြင့်တိုင်းတာခြင်း / Vital Signs
3. အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း / Color Blind Test
4. ရောဂါ ၅ မျိုးအတွက်ဆေးလက်မှတ်စာရွက်စာတမ်း
2. အန္တရာယ်အဆင့်ရှိတီဘီရောဂါ / Advanced Pulmonary Tuberculosis
3. မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း ရှိ၊မရှိစစ်ဆေးခြင်း / Drug addiction
4. နာတာရှည်အရက်စွဲခြင်း ရှိ၊မရှိစစ်ဆေးခြင် / Chronic alcoholism
5. ဆင်ခြေထောက်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း / Elephantiasis
*အလုပ်လျှောက်ရန်နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန် ဆေးလက်မှတ်၏အချိန်ကာလသည် ဆေးလက်မှတ်လာတောင်းတဲ့ရက်ကစပြီး သုံးခွင့်ရန် ၁ လထက်မကျော်စေရပါ။
များသောအားဖြင့်လူသည်အလုပ်လျှောက်ရန် နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန်ဆေးလက်မှတ်ရရှိဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဆေးစစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ကြပါသည်။ INTOUCH Medicare ဆေးခန်းတွင် အဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်လွယ်ကူမြန်ဆန်ကြောင်း စိတ်ချနိုင်ပါသည်။မလာစစ်ဆေးခင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်လိုအပ်သောာအချက်များမှာ-
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနှင့်ဆေးလက်မှတ်တောင်းရင်ရေနှင့်အစာများကိုရှောင်လာဖို့မလိုပါ။သို့ပေမဲ့သင်၏စစ်ဆေးသောအဖြေတိကျမှန်ကန်ဖို့အတွက် အရက်သောက်ခြင်း၊အဆီနှင့်သကြားများသောအစားအစာ၊ကဖေးအင်းပါသောအချိုရည် များသာလျှင်ရှောင်ရပါမည်။ထိုအရာများကိုမလာစစ်ဆေးခင်အနည်းဆုံး၂၄ နာရီထဲ၌ရှောင်လာဖို့လိုအပ်သည်။
အလုပ်လျှောက်ရန်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန် ၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တိုးရန်ဆေးလက်မှတ်များအတွက်သည် မိမိ၏ကျန်းမာရေးကိုဆေးခန်းသို့မလာစစ်ဆေးခင် သင်သည်အနည်းဆုံး 6-8နာရီကြာသည်အထိအိပ်ရေး၀၀အိပ်လာသင့်ပါသည်၊မစစ်ဆေးခင်အိပ်ရေးအ၀အိပ်ပြီး မိမိသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ သွေးဖိအား၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်စသည်တို့ကို စစ်ဆေးမှုရလဒ်ထဲ၌သက်ရောက်စေနိုင်ပါမည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်သည်စစ်ဆေးဖို့အဆင်ပြေသောအကျီများကို၀တ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်မကြပ်သောအင်္ကျီကဲ့သို့ ၎င်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုတိုင်းတာရန် (သို့) သွေးစစ်ရန်လွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ သတ္တုလက်ဝတ်ရတနာများဝတ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည် အထူးသဖြင့်ဆွဲကြိုးများဖြစ်၍ ၎င်းသည်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် အမျိုးသမီးများအနေနှင့်သံပါသောအတွင်း အကျီများ၀တ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လုပ်ရမည့်အရာတော့ဆရာ၀န်ထံသို့ပြောကြားရန်အချက်အလက်များပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါသည် ဉပမာအားဖြင့် မိမိ၏နဂိုရောဂါ၊ပုံမှန်နေ့စဉ်သောက်နေသောဆေး၊ကိုယ်၀န်ဆောင်နေခြင်းများ အစရှိသဖြင့်၊အလုပ်လုပ်သောနေရာကိုထိရောက်စေနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများရှိပါကတိကျမှန်ကန်သောအဖြေရယူဖု့ဆရာဆီသို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနှင့် အလုပ်လျှောက်ရန်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ရန် ၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တိုးရန်ဆေးလက်မှတ်များအတွက်သည် လုပ်ဆောင်ရသောအချက်သည်လွယ်ကူစွာအဆင်ပြေပြီးလျင်မြန်စေပါသည်၊ကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်အားဖြင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးပါသည်၊မိမိအိမ်နဲ့နီးသောဆေးခန်းခွဲကိုသွားနိုင်ပြီး အသေးစိတ်များကိုထပ်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းကိုGoogle ထဲ၌ရှာနိုင်ပါသည်။